Vanarcissist | Chikunguru 2021
Nei MaEmpaths Uye maNarcissist Vachipera Muhukama?
Sei ma empaths nema narcissist vachikwezana uye vachipedzisira vava muhukama? Ichi chinyorwa chinotarisa zvakadzama muzvikonzero zvepfungwa.
Zvinhu zvisere Zvakakosha Kudzoreredza Kubva kuNarcissistic Abuse
Ndiri kufunga kuti ndingawane sei kubva mukushungurudzwa? Heano 8 ANOFANIRA KUITA kana iwe uchida kuenderera mberi, kupora kubva pahukama hwako, uye kubudirira.
Kubiridzira Nzira dzeNarcissist
Ese ma narcissist vanobiridzira? Sei vachizviita? Ungaziva sei kana munhu achibiridzira? Unofanira kutaura navo here? Isu tinopindura iyi mibvunzo uye nezvimwe.
Maitiro Ekutaurirana zvinobudirira Mushure meNarcissistic Relationship
Iwe unonetseka kuti utaure zvinobudirira kubva pahukama hwako hwekushungurudza pamaoko emunyengeri? Dzidza maitiro ekudzidzazve aya hunyanzvi.
9 Kunzwa Kunoda Kuti VaNarcissist Vagadzire Kugadzira Pamatambudziko Avo
Sechikamu chekubata kwavo nekushungurudza, varairidzi vanotsvaga kuita kuti avo vavanobata vanzwe zvimwe zvinhu. Heano mapfumbamwe manzwiro avanoda kugadzira mupfungwa dzako.
Kurwadzisa Sei A Narcissist Senge Ivo Vanokuvadza Iwe
Saka iwe unoda kudzorera zvako kune an nississist. Iwe unoda kuvakuvadza, kuvatyora, kuvaita kuti vatambure. Ungaite sei izvi uchichengetedza hutano hwako? Ungaita sei kuti matafura aite kuti vanetseke? Mhinduro yacho inogona kunge isiri iyo yaunofunga.
Sei Vana Vakwegura Vemadzimai eNarcissistic Vanogona Kunzvenga Emotional Kupunzika Iri Zuva raAmai
Kune vana vanamai vanopenga, kupemberera kwegore negore kweZuva raAmai kunogona kuva nguva yakaoma kwazvo yekugadzirisa nemanzwiro. Panzvimbo pokutambura zvakawandisa, tora dzimwe dzeidzi nzira dzekugadzirisa matambudziko anoshanda uye epfungwa aungatarisana nawo.
12 Zviratidzo Zvauri Kubata NaAnonyanyisa Narcissist
Pamugumo wakaomesesa weiyo narcissistic spectrum ndiyo yakaipa narcissist. Idzi ndidzo mhando dzevanhu vanogona kukanganisa hupenyu, uye zvinonyanya kudzivirirwa. Heano gumi nemaviri zviratidzo aunogona kutsvaga kuti akubatsire kuona imwe paunosangana navo.
Zvinhu zvitatu Zvinoitwa Nembudzi Dzinobhururuka dzeNarcissist (+ Ungavadzivise Sei)
VaNarcissist havaite zvavo zvese kukuvadza ivo pachavo - ivo zvakare vanotora Flying Monkeys kuvakuvadza nekuvashandisa. Heano maitiro ekuvabvisa zvombo.
Kuvhenekesa gasi: 22 Mienzaniso Yeichi Chakashata Chekumanikidza Mindf * ck
Iyi mienzaniso yekujekesa gasi inoratidza mashandisiro ayo muhukama, kumisikidzwa kwemhuri (semuenzaniso nevabereki), kana kubasa (semuenzaniso nashe). Uyezve gumi nemana zviratidzo zvekutarisa.
Nei UCHISINGOFANIRA KUEDZA Couple Therapy NaNarcissist
Kana iwe uchida uye uine hanya narcissist, zvinogona kuyedza kuyedza vakaroora kurapwa navo senzira yekuvandudza hukama hwenyu. Usadaro. Heino chikonzero.
Kana Amai Vako VaNarcissist
Iyo nyaya yehumwe hure hwemukadzi naamai vanopenga, kuti akazonzwisisa sei zvakaitika kwaari, uye mamwe mazwi ekuporesa kune vamwe.
Iyo Grey Rock Nzira YeKubata NaNarcissist Kana Pasina Kubata Isisiri Sarudzo
Dzidza maitiro ekushandisa iyo Grey Rock Method yekubata narcissist muhupenyu hwako kana usinga bate chete haisi iyo chaiyo sarudzo.
6 Mamwe Mazwi Kubva Kuduramazwi reNarcissist Unonyatsoda Kuziva
Pane mazwi mazhinji akashandiswa kutsanangura maficha ehukama hwehunhu; heano matanhatu ekuti uzive nawo.
6 Zviratidzo Zvauri Kubata Nayo Ane Mwero Narcissist (Asi Zvakadaro A Narcissist)
Narcissism chinetso chakatarisana chinoreva kuti pane chinhu chakadai se 'mwero' narcissist. Aya matanhatu zviratidzo achakubatsira iwe kuona kana paine imwe muhupenyu hwako.
Iyo Covert Narcissist Uye Maitiro Aungaita Kuti Usavaone Iwo Akananga Kure
Anovhara narcissist anogona kunge akaoma kuona dzimwe nguva, asi usanyengerwe kufunga kuti maitiro avo haana chepfu uye anodzvinyirira.
6 Tactics Narcissists Vanoshandisa Kupesana Nevavo Vakatambudzwa (Izvo Zvaunofanirwa Kuziva)
Kana iwe wakamboona kubiridzirwa kwe narcissist zvisati zvaitika, ungangoda kuwedzera aya mitsara kuizwi rako rekutsanangura zvawakatambura kune vamwe.
5 Zvinhu Zvakamonyoroka VaNarcissist Vanotaura Uye Kuita Kuti Ugodzoka
Panguva iyo iwe paunofunga kuti watiza kubva kune narcissist husiku, iwe unosangana nezvakasiyana zvidobi zvavanoshandisa kuti vadzokere iwe muhupenyu hwavo.
Iwo Masiki matanhatu eANarcissist (Uye Maitiro Ekuvatarisa iwo)
Narcissist anokwanisa kuisa pamasikisi akasiyana siyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu uye chinangwa chavo / chinangwa - heano ma6 aunowona kazhinji.
Maitiro ANarcissist Kufungidzira KweGrandeur Kunodzivirira Ivo Kuti Varege Kuda Iwe
Narcissist inokwanisa rudo here? Chinyorwa ichi chinoita nharo kuti havasi uye kuti pane chimwe chikonzero chekutanga chinotitadzisa kuinzwa.
sei kurega kuva mukadzi anotonga
pamusoro gumi zvinhu zvekuita kana wakasuruvara
ndisingazive zvekuita muhupenyu
mukadzi wangu anondipomera zvese
Dr seuss katsi mune ngowani makotesheni